Iviniga liyi-currant, elungiselelwe ngokuzimela, liyisimo esihle kakhulu somkhiqizo wesitolo. Kumele kuphawulwe ngokushesha ukuthi akulula ukukwenza.
Omunye akakwazi kodwa uthi uviniga currant akahle hhayi kuphela kumnyama, kodwa futhi futhi kusuka amajikijolo abomvu. Ngaphezu kwalokho, kule sauce, kaningi ukufaka amaqabunga ama cherry, ama-raspberries nezinye izihlahla zezithelo nezihlahla, okuthuthukisa kakhulu ukunambitheka komkhiqizo wokugcina.
Ngakho kufanele wenze kanjani uviniga owenziwe ekhaya? Iviniga i-currant ilungiswa ngokumane, kodwa isikhathi esithile. Namuhla sizokunikeza ezinye zokupheka okuningiliziwe, usebenzisa ukuthi, ngeke usayithenga lomkhiqizo esitolo, kodwa uzokwenza ngokwakho.
I-redcurrant uviniga: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Ukuze wenze isoso esingasetshenziselwa ukulungisa izitsha ezihlukahlukene, udinga ukubeka inamba encane yezithako ezilula futhi ezifinyeleleka ngokuphelele. Uma ungumgadi wegadi, futhi engadini yakho kunezitshalo ezinamajikijolo abomvu, khona-ke ungalungisa uviniga we-currant okungenani njalo ngonyaka. Konke, ngokugcina kahle, lo mkhiqizo awulahlekelwa yizimfanelo zakhe isikhathi eside.
I-currant ebomvu (ngaphandle kwamahlumela) - ngqo 500 g;
Ishukela le-sand ayikhulu - cishe i-200 g;
Amanzi ahlungwa - cishe amalitha angu-2.
Ngokuqinisekile, abaningi bayazi ukuthi ama-sauces e-currant ahlale ehlwaya kakhulu futhi enamakha. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi ungenzi nje kuphela umdwebo ovela ku-berry owethulwe, kodwa futhi umkhiqizo onjengoba uviniga. Kuhle ukugcoba inyama, inhlanzi, uyifake ku-goulash, ama-saladi ngisho nokucima ithebula le-baking soda ngesikhathi sokubhaka kwanoma imuphi umkhiqizo. Kodwa akuwona wonke umuntu owaziyo ukulungiselela uviniga currant. Yingakho kulesi sihloko sanquma ukumboza lesi sihloko sokucubungula.
Okokuqala, kudingeka uthinte amajikijolo abomvu, uwahlukanise namagatsha nezinye izinhlanga. Njengomthetho, ama-currants awahlanjululwa ukulungiselela uviniga. Kodwa uma ingcolile kakhulu, isanconywa ukuba iwuhlanza emanzini abandayo, okwathi ngemva kwalokho ithukuthele kakhulu ku-colander.
Iviniga elibomvu lenziwe kanjani? Iresiphi yalo mkhiqizo idinga ukusebenzisa isiraphu elimnandi. Ukuze ukwenze, udinga ukuthululela ushukela wesihlabathi emkhunjini omkhulu, bese uthele ama-2 amalitha amanzi alula. Izithako ezengeziwe zidinga ukushiswa, ubilise futhi zipholile ngokuphelele.
Ngemva kokucubungula amajikijolo nokulungiselela isiraphu, kufanele uqhubeke nokuxhumana kwabo. Ukuze wenze lokhu, i-currant ebomvu kufanele iguqulwe yi-tolter, ibekwe emgodini omkhulu weglasi, bese ithululelwa ngamanzi amnandi ahlile. Ngalesi fomu, intamo yesitsha esinezidingo kufanele ihlanganiswe nge-napkin, bese uyibeka kwikhabhinethi elimnyama. Ukuxuba njalo u-pulp, kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kommbila kuvunyelwe ngamandla. Ekupheleni kwalolu hlelo, iviniga izobe isilungele ngokuphelele. Njengomthetho, kuthatha izinyanga ezi-2-2.5.
Ngemuva kokuthi inqubo yokuvutshelwa igcwaliswe, okuqukethwe kwe-can kufanele kuhlungiwe nge-gauze yamaplaylayer, ithululelwe emabhodleleni, ivaliwe ngokuqinile ngesembozo futhi ifakwe esitolo esibandayo. Kulo mviniga wesimo seviniga kungagcinwa iminyaka eminingana.
Senza uviniga emaqabunga e-currant namajikijolo
Wonke umuntu uyazi izakhiwo zamaqabunga e-currant bush. Yingakho siphakamisela ukwenza uviniga owenziwe ngokwenza lokhu okubonakalayo okuwusizo. Ngendlela, ngalezi zinhloso kungcono ukuthatha amahlumela amasha asanda kukhula.
Ngakho, uviniga wama- black currant namaqabunga udinga ukusebenzisa lezi zinto ezilandelayo:
Amahlumela amancane esihlahla se-currant - cishe ama-500 g;
Isihlabathi esihle soshukela - 1.5 izinkomishi;
Ama-currants omnyama namagilebhisi omisiwe - ama-pcs ambalwa.;
Amanzi ahlungwa - cishe ama-2.5 amalitha.
Ukuze wenze umkhiqizo onjalo, kufanele uqoqe amahlumela amancane omnyama we-currant kusengaphambili, bese uwasika kahle bese uwabeka embizeni yamatitha amathathu, ugcwalise ku-2/3 ingxenye. Eceleni kwamaqabunga udinga ukwengeza amajikijolo amnyama omisiwe namagilebhisi omisiwe. Ekugcineni, zonke izingxenye zidinga ukugcwaliswa ushukela futhi zithelwe ngamanzi ajwayelekile ahlungiwe.
Ngemuva kokuba ibhodlela ligcwele zonke izithako, okuqukethwe kwalo kufanele kuxubaniswe kahle ne-spoon enkulu. Kule nkinga, ushukela kumele uqede ngokuphelele. Okulandelayo, intanyeni yesitsha kumele ihlanganiswe ngendwangu noma indwangu yesikotini, uyibophe ngentambo noma ukuqina.
Kulesi simo, isitsha kufanele sibekwe kwiphalathi futhi ithunyelwe ekamelweni elimnyama, lapho kudingeke khona ukuligcina amaviki amane. Kulesi simo, nsuku zonke, i-pulp eyakhelwe kufanele ihanjiswe nge-spoon enkulu.
Ngemuva kwalesi sikhathi, okuqukethwe okusemandleni kungadingeka kuhlungiwe nge-gauze yamaplaylayer, bese kuthunyelwa kwisitsha esifanayo, esifakwe ngokufana nekotini noma indwangu yelineni bese efakwa kwikhabhinethi elimnyama. Okwamanje, uviniga we-currant unconywa ukuba uhlale cishe izinyanga ezimbili.
Ngemuva kokuthi uviniga usulungile, kusuka phezulu kufanele ususe ngokucophelela isisindo se-gelatinous, kanye noketshezi olusele - oluhlungiwe nge-gauze. Ekugcineni, umkhiqizo ohlanzekile futhi obala uyadingeka ukuba uthululwe phezu kwamabhodlela esibuko, uboshwe kahle futhi ufakwe esiqandisini. Esikhathini esizayo, uviniga we-currant ungasetshenziselwa injongo yawo ehlosiwe.
Yenza uviniga ozenzelayo usebenzisa iqabunga le-cherry
Iviniga elivela ebomvu currant ne-cherry leaf lihle kunomkhiqizo okwenziwe kuphela kumajikijolo athile. Yingakho ngesikhathi sokuzilungiselela le sauce, sincoma ukuthi usebenzise amahlumela amancane.
Amahlamvu kaCherry - angaba ngu-20 g;
Ukuze wenze umkhiqizo onjalo ekhaya, asikho isidingo sokunikeza le nqubo isikhathi esiningi samahhala. Ngemuva kwalokho, kulungiselelwe kalula futhi ngokushesha.
Okokuqala, udinga ukuhlunga kuzo zonke amajikijolo, bese uwahlanza kancane emanzini abandayo. Ngemuva kwalokho, izithelo ezicutshungelwe kumele zifakwe esitsheni esikhulu futhi ziphawulwe ngesilwane ukuze yonke ijusi iphume. Esikhathini esizayo, inqwaba ewumphumela kufanele idluliselwe egumbini elingu-litre jar. Ngesikhathi esifanayo ukusabalalisa amajikijolo avuthiwe kulandela izendlalelo, ukushintshanisa namahlamvu e-cherry.
Ngemuva kokuba isitsha sigcwaliswe, sidingeka emanzini abilisiwe abilisiwe ukuqothula ngokuphelele isihlabathi soshukela. Esikhathini esizayo, isiraphu ephumela kufanele igcwalise lonke i-currant mass. Ngemuva kwalokhu, okuqukethwe okuqukethwe kulesi sitsha kufanele kuhanjiswe kahle nge-spoon enkulu futhi ikhava nge-gauze ehlukahlukene.
Yenza lokhu kuphakanyiswa kunconywa ngesonto lokuqala. Izinsuku ezingama-49 ezisele zidingekile kuphela ukuqinisekisa ukuthi iviniga igxilile kakhulu futhi ayithuli emaphethelweni ezitsha.
Ukugcwalisa umkhiqizo ophelile
Emva kokuqukethwe kwe-stop kungavimba ukuvuthwa futhi kube lula njengoba kungenzeka, iviniga kufanele ihlungwe ngokusebenzisa indwangu yelineni. Kule fomu kufanele ithululelwe phezu amabhodlela amnyama glass futhi ibekwe esitolo ebandayo. Abapheki abanokuhlangenwe nakho abaye benza lo mkhiqizo ekhaya ngokuphindaphindiwe, bathi iviniga i-currant ingagcinwa ngaphandle kokulahlekelwa yizimfanelo zayo, kuze kuphele iminyaka engu-8-10.
Ukupheka i- apple cider uviniga ngamaqabunga e-currant
Uviniga ovela ema-apula namaqabunga e-currant omnyama uphenduka kakhulu futhi awumnandi. Isithako esinjalo esingokwemvelo singasetshenziswa ngenkathi kulungiswa izinhlanzi nezinyama zenyama, kanye nokucubungula imikhiqizo efulawa enobuthi obuhlaza.
Ngakho, ukwenza uviniga wemvelo, sidinga:
Ama-apula aluhlaza okomuncu - cishe ama-500 g;
Amaqabunga ama-blackcurrant asemusha - angaba ngu-500 g;
Ushukela omuhle we-granulated - cishe 200 g;
Ngaphambi kokwenza umkhiqizo onjalo, kufanele ugeze ama-apula aluhlaza, bese uwasika emaqenjini amancane, ngenkathi ususa ibhokisi lembewu. Kubalulekile futhi ukugeza amaqabunga amancane e-currant emnyama ngokwehlukana. Ngokuphathelene namanzi noshukela ogqamile, kubalulekile ukwenza isiraphu kulezi zithako, ukufudumala kancane esitofu.
Sigcina umkhiqizo endaweni emnyama
Ngemuva kokuthi izithelo namaqabunga e-currant zicutshungulwa, kufanele uthathe ingilazi engamalitha amathathu-litre, ubeke khona ama-apole aqoshiwe, uwashintshe namahlumela esitshalo sezithelo. Ukubeka zonke izithako esitsheni, badinga isilaphu esisodwa ehlile ngokuphelele. Khona-ke intamo yommbizi kufanele ifakwe nge-gauze, uyilungise ngebhodi le-raber. Ngalesi fomu, umkhiqizo kufanele ubekwe ehabhinethi elimnyama futhi ugcinwe lapho kuze kube yilapho ukuvinjelwa kuqedwa. Le nqubo ingakuthatha kusukela emavikini ambalwa kuya ezinyangeni eziningana. Konke kuxhomeke ezinhlobonhlobo zama-apula.
Ngemuva kokuthi inqubo yokuvutshelwa kokuqukethwe kwe-canal igweke ngokuphelele, kufanele ihlungwe ngokusebenzisa ilineni elincane noma indwangu yokotini. Iviniga elibonakalayo elibonakalayo kufanele liboshwe ngamabhodlela amnyama engilazi, ivalwe ngokuqinile futhi ifakwe esiqandisini. Ngokusho kochwepheshe abaningi, umkhiqizo onjalo owenziwe ngesisekelo sama-apula, ugcinwa isikhathi esincane kakhulu kunesithako esenziwe kunoma yikuphi amajikijolo. Kodwa kunoma yikuphi, uviniga owenziwe ngomumo ungasetshenziswa ngokuphephile ukupheka izitsha ezihlukahlukene nokubhaka.
Ake sibambe imiphumela
Manje uyazi ukuthi uviniga awukwazi ukuthengwa kuphela esitolo, kodwa futhi uzenze ngokwakho. Ukusebenzisa lezi noma ezinye imikhiqizo, uyakwazi ukushintsha ukunambitheka kwalesi sithako, kanye nokuphila kwayo kwelanga.
Amaprotheni omuncu. Amaprotheni emikhiqizweni yobisi
Ukupheka kanjani isinkwa se-oat esenziwe ngokwenziwe: iresiphi ngesinyathelo ngesithombe
Ikhadi sangaphandle umsindo. izici Basic oluthandwa
Indlela yokunqoba indoda engu crisis yakhe
What do izinkomba ukuhlolwa kwegazi
I ngokwengqondo Thriller "Dragon Syndrome": abalingisi, izindima, sakhiwo isifinyezo
Usuku uthisha wesikole samabanga aphezulu. Siyakuhalalisela uthisha
Indlela ukunciphisa amadoda crazy embhedeni Amathiphu
On Google - veypinga ketshezi
Blondes Talented - abadlali movie
Abadlali European: "The Cave iGolden Rose"
Kungenzeka ukuba babelethe ngonyaka eqa: izimpawu, imicabango yabantu